Maareynta Kiiska - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Maaraynta Caafimaadka > Maareynta Kiiska
Maareeyayaasha kiisku waxay kaa caawinayaan safarkaaga caafimaadkaaga si aad uga fiicnaato. Way ku dhageysanayaan kuna taageeraan baahidaada.
Wax ka qabashada baahiyahaaga, wadajir
Marka noloshu mashquul tahay oo aan la hubin, way adkaan kartaa in la hubiyo in dhammaan baahiyahaaga caafimaad la daboolay. Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) wuxuu abuuray barnaamijka Maareynta Kiiska si uu kuu taageero.
Maamulaha kiiskaaga CHPW waa u doodahaaga, qancintaada, iyo turjubaanka nidaamka daryeelka caafimaadka. Way kula shaqeyn doonaan si loo ogaado baahiyahaaga caafimaad iyo sida aad wax uga qaban karto. Tani waxay noqon kartaa:
Kaa caawinta inaad kala hadasho bixiyeyaashaada daryeelka aad u baahan tahay
In aan ku weyddiiyo su'aalo ku saabsan caafimaadkaaga, qorshe wada samayno, iyo ku taageeraya adiga markaad ka shaqeyneyso yoolalka caafimaadka
Daryeelka caafimaadka maskaxda ama cilladda isticmaalka mukhaadaraadka. Maamulayaasha kiiskeena ayaa kaa caawin kara inaad jadwal sameyso oo aad ilaaliso balamaha, maareynta daawada, iyo inbadan.
Ku xidhanaya adiga caawimaad maxalli ah oo ku saabsan guryaha, cuntada, iyo bixinta biilasha
Bixinta waxbarasho ku saabsan nidaamka daryeelka caafimaadka, xaaladaha caafimaad ee aad haysato, iyo faa'iidooyinkaaga CHPW
Maareynta Kiiska ayaa loo daboolay xubin kasta oo ka tirsan CHPW
Ma jiraan wax lacag bixin ah ama kharash ah oo adiga lagaa qaadayo. Qaar badan oo ka mid ah maareeyayaasha kiiskeennu waa shaqaale bulsheed oo ruqsad haysta, kalkaaliyayaal caafimaad, ama khabiiro.
Sidee maamule kiis i caawin karaa?
Sababtoo ah maaraynta kiisaska CHPW waxay ku saleysan tahay baahiyahaaga caafimaad ee shakhsi ahaaneed, ma jiraan laba xubnood oo leh khibrad isku mid ah. Laakiin waa kuwan waxyaabo ay maareeyayaashayadu kaa caawin karaan:
Helitaanka bixiye daryeel caafimaad
Hubinta inaad ballan sameysan karto markaad u baahato mid
Kaa caawintaada inaad buuxiso foomamka barnaamijyada gobolka iyo federaalka ee aad uqalmi karto, sida iinta iyo WIC
Abaabulka gaadiidka ballamaha
Kuu barayo xirfado kaa caawinaya inaad maareyso xaaladahaaga caafimaad
La socoshada dawooyinka laguu qoray
Haddii aad leedahay baahi gaar ah laakiin aadan hubin haddii maamule kiis uu yahay qofka saxda ah ee ku caawin kara, fadlan wac adeegga macmiilka at 1-800-440-1561 (TTY: Garaac 711) laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcaha. Waan ku farxi doonaa inaan ku caawino.
Sideen ku helaa maamule kiis?
Adigu xubin xubin ka ah CHPW, waxaad u gudbin kartaa naftaada maaraynta kiiska. Ama waxaad u gudbin kartaa cunug, qaraabo, ama saaxiib oo xubin ka ah CHPW.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad rabto inaad naftaada u gudbiso Maareynta Kiiska, fadlan la xiriir kooxdayada Maareynta Kiiska ee 1-866-418-7004.
Noocyada Maaraynta Kiiska Gaarka ah
Dhalinyarada Ku-Meel Gaarka ah
Si aad u codsato caawimaad helitaanka shabakad Bixiyaha Falanqaynta Habdhaqanka La Adeegsaday (ABA) fadlan wac 1-844-225-8624.
CHPW waxay lashaqeeysaa shabakadeena bixiyaha iyo ururada ku saleysan bulshada ee Washington si ay ugu adeegaan caafimaadka ugu fiican xubnaheena. Markaa haddii qof ka tirsan shabakaddaada daryeelka uu arko inaad dhibaato haysato, waxay kuu gudbin karaan si loo maareeyo kiis sidoo kale.
Waa kuwan qaar ka mid ah dadka laga yaabo inay kuu diraan maareynta kiisaska CHPW:
Xirfadlaha daryeelka aasaasiga ah ama shaqaalaha
Qorsheeyaha sii deynta
Adeegga Macaamiisha CHPW, Caafimaadka Dadweynaha, iyo / ama waaxaha Maareynta Kala-guurka
Barnaamijka Maareynta Caafimaadka (Adeegsiga)